जसपा अध्यक्ष यादव भन्छन्- केही साथीले बाटो विराए
काठमाडौं। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीका केही नेता तथा सांसदहरुले बाटो बिराएको बताएका छन्। उनले सरकार गठनका सम्वन्धमा सहभागी नभएको विषयलाई उल्लेख गर्दै भने, "कोही साथीहरुले फरक बाटो हिँडेर बाटो नै विराउनु भएको छ। त्यो बाटोले कहाँ पुर्‍याउछ, मुलुक कहाँ पुग्ने हो उहाँहरुलाई थाहा छैन।"
जनताको असल साथी माओवादी हो : अध्यक्ष दाहाल
चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘माओवादी केन्द्र’का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताको असली साथी भनेको माओवादी केन्द्र रहेको बताएका छन् । हिजो (बुधबार) यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रको एक मात्र अग्रगामी शक्ति र जनताको साथी माओवादी भएको दाबी गरे । अग्रगामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न माओवादी पार्टी […]
‘ऊ हेर, त्यो हिरोको साथी होइन र ?’
२०५८ सालमा नायक शिव श्रेष्ठ अभिनित फिल्म ‘मामाघर’ फिल्महलमा लागेको थियो । फिल्ममा उनी अभिनेता श्रेष्ठको साथीको भूमिकामा थिए । त्यो समय उनी जहाँ जान्थे, सबैले उनलाई ‘ओ, हिरोको साथी’ भनेर बोलाउँथे ।....त्यस्तै, राजेश हमालको फिल्म ‘कर्तब्य’ रिलिज भएको केही दिन भएको थियो । उनी साथीहरुसँग बानेश्वरको एक रेष्टुरेन्टमा चिया पिएर गफिदै थिए । रेष्टुरेन्टमा वरपर रहेकाको ध्यान उनले आफूतिर देखे । कोही साउती गर्दै ‘ऊ हेर, त्यो हिरोको साथी होइन र ?’ भन्दै थिए । त
Ratopati कार्तिक २०७८
हो, तीन कक्षा पढ्दापढ्दै हामीसंग छुट्टिएर बाबुआमासंगै शहर पसेको हाम्रो दश बर्से मिल्ने साथी आएको खबर पाएका थियौं। होस सम्हालेदेखि आठ वर्षको उमेरसम्म संगै पढ्यौ,खेल्यौं र रमायौं। हामीबिना ऊ अधुरो, ऊबिना हामी अधुरो, छुट्टिने बेलामा गहभरि आँसु गर्दै बिदाइ भए...
नागरिक दैनिक आषाढ २०७८
मेरो प्यारो साथी सबैभन्दा माथि, सँगसँगै पढ्ने खेल्ने,मिल्ने कति जाति। सधैं सँगै स्कुल जान्छौं सँगै घर आउछौँ, गृहकार्य सकेपछि सँगै खेल्न पाउँछौँ। उसलाई चोट लाग्यो भने मलाई पनि दुख्छ, मेरो मुख निन्याउरो भए ऊ पनि त रुन्छ।...
त्यो मेरो साथी नेता भएछ!
लाग्यो, गुदी न सुदीको उसको बुद्धि यो देशको जेथा पो भएछ अक्कल न सक्कलको त्यो मेरो साथी यो देशको नेता भएछ!
सेतोपाटी आषाढ २०७८
‘साथी’को नाता हरेक मानिसको जीवनमा निकै अपरिहार्य र महत्व हुने भएकाले यो जोड्नुअघि, जोडिसकेपछि तोड्नअघि पर्याप्त सचेतता अपनाउनुपर्छ। यसो भयो भने कसैलाई साथी बनाएर पछुताउनुपर्दैन।...
-अर्जुन घर्ती ‘क्षितिज’ए साथी, तिमी कस्तो !ए साथी, तिमी कस्तो !कहिले पूर्णिमाको जुनझैँ चम्किदिन्छौकहिले औँशीको रातझैँ अँधेरिन्छौ,कहिले वसन्तको कोपिलाझैँ फुलिदिन्छौकहिले शिशिरको पातझैँ झरिदिन्छौ,चिन्नै गाह्रो भो, साथी तिमी कस्तो !ए साथी, तिमी कस्तो !कहिले समुद्रझैँ शान्त हुन्छौकहिले असारे भेलझैँ गडगडाउँछौ,कहिले मन्द हावाझैँ सुसाउँछौकहिले हुरी बतासझैँ हुर्हुराउँछौ,बुझ्नै सारो भो, साथी तिमी कस्तो ! ए साथी, तिमी कस्तो !कहिले खडेरीमा वर्षाझैँ झरिदिन्छौकहिले वर्षातम
पुष्पाकी साथी बन्न आइन् अञ्जली
२ वैशाख, चितवन । चितवनको सौराहास्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा एक्लै हुर्किरहेकी थिइन् पुष्पा । यतिबेला भने उनले सानी साथी पाएकी छिन् । अर्थात पोहोर माघमा पुष्पा जत्री थिइन्, उत्रै छिन् अञ्जली । पुष्पा नयाँ र सानी साथी अञ्जलीलाई माया गर्छिन्-बैनीलाई जस्तै । एउटै आमाले जन्माएका सन्तानजस्ता लाग्छन् पुष्पा र अञ्जली । अञ्जली जम्मा साता […]
अनलाइनखबर चैत्र २०७७
खुब याद आउँछ साथी तिम्रो
साथी के तिमीलाई याद छ, सरहरुको अनेकौँ जिस्काउने नाम राख्दिँदै क्लासमा अनेकौँ याद छोडेको?
स्वनाम साथी : सर्वहाराका लागि महापाठ
चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिले नेपाली युवामा कुन स्तरको आवेग पैदा गर्ने गरेको थियो भनेर जान्न स्वनाम साथी (शशी शेरचन) को जीवन बुझ्नपर्ने हुन्छ । चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नेहरू धेरै थिए, कति अहिले पनि जीवित छन् । त्यसमध्येका स्वनाम साथी एकमात्र पात्र भेट्छु जो जीवनको अन्त्यसम्म सक्रिय रह्यो । श्रमिक, भुइँमान्छेको लागि लड्ने […]